Cheap Organic & onyinye fatịlaịza Rotary Drum Ihicha Machine Suppliers na Factory | YiZheng
Gịnị bụ Rotary Single Cylinder Ihicha Machine?
Na Rotary Single Cylinder Ihicha igwe bụ nnukwu igwe eji emepụta ihe eji eme fatịlaịza fatịlaịza na ụlọ ọrụ fatịlaịza. Ọ bụ otu n'ime akụrụngwa dị mkpa. NaRotary Single Cylinder Ihicha igwe bụ iji kpoo ihe ndị na-emepụta fatịlaịza na mmiri nke mmiri nke 50% ~ 55% mgbe granulation gachara ọdịnaya mmiri ≦ 30% iji mezuo ụkpụrụ nke fatịlaịza organic. Mgbe ejiri ya mee ihe nchekwa oge ma ọ bụ dị ka akụrụngwa maka nhazi ọzọ, ọdịnaya mmiri ga-abụ ≦ 13%.
Gịnị bụ Rotary Single Cylinder Ihicha igwe eji?
Rotary Single Cylinder Ihicha igwe ọtụtụ-eji nke ihicha slag nzu nzu, kol ntụ ntụ, slag, ụrọ, wdg The ihicha Machine nwekwara ike-eji na-eji ụlọ ihe, nkà mmụta banyere ígwè, chemical, na simenti ụlọ ọrụ.
Ọrụ ofkpụrụ nke Rotary Single Cylinder Ihicha Machine
Akụrụ zigara hopper nke Rotary Single Cylinder Ihicha igwe site na ebu ebu ma ọ bụ igwe ịwụ. A wụnyere gbọmgbọm ahụ na mkpọda gaa n’ahịrị kwụ ọtọ. Akụrụngwa na-esi na gbọmgbọm ahụ site n'akụkụ dị elu, ikuku dị ọkụ na-abanyekwa na gbọmgbọm ahụ site na ala ala, ihe na ikuku ọkụ na-agwakọta ọnụ. Akụrụngwa na-aga n'akụkụ ala site na ike ndọda mgbe gbọmgbọm ahụ na-agbagharị. Ndị na-ebuli ihe dị n'ime gbọmgbọm na-ebuli ihe na ala iji mee ka ihe na ikuku na-ekpo ọkụ kpamkpam. Ya mere ihicha arụmọrụ na-mma.
Gịnị bụ akụkụ nke Rotary Single Silinda Ihicha Machine?
* Ezi uche Ọdịdị, magburu onwe ya ationgha, elu mmepụta, ala oriri, echekwa na gburugburu ebe obibi, wdg
* The pụrụ iche esịtidem Ọdịdị nke Rotary Ihicha Machine hụ na mmiri ihe nke na-agaghị egbochi na-arapara ihicha Machine.
* Igwe na-ehicha Rotary nwere ike iguzogide nnukwu okpomọkụ ka o wee kpoo ihe ngwa ngwa ma nwee nnukwu ikike.
* Rotary Ihicha Machine dị mfe iji rụọ ọrụ na ịnọgide na-enwe.
* Rotary Ihicha Machine nwere ike iji unyi, mmanụ, gas, biomass dị ka mmanụ ụgbọala.
Rotary Single Sịlịnda Ihicha Machine Video Ngosipụta
Rotary Single Cylinder Ihicha Machine Model Nhọrọ
Usoro a nke Rotary Single Cylinder Ihicha igwe nwere ụdị dị iche iche, nke enwere ike ịhọrọ dịka arụmọrụ n'ezie, ma ọ bụ ahaziri ya.
E gosipụtara teknụzụ ndị isi na tebụl na-esonụ:
Nke gara aga: Vetikal Fatịlaịza igwekota
Osote: Rotary Drum Jụrụ Igwe